Hargeysa Online| 24 Hrs News Update HargeysaOnline.Net - News: Taliyaha cusub ee Ciidanka Booliska Somaliland oo xilkii la wareegay.
Taliyaha cusub ee Ciidanka Booliska Somaliland oo xilkii la wareegay.
Taliyaha cusub ee Ciidanka Booliska Sareeyo Guuto Dabagalle ayaa maanta si rasmiya ula wareeegay xilkii, isla markaana ka sheekeeyey waxyaaluhu qaban doonno.
Munaasibadda uu xilka kula wareegayey waxa ka soo qaybgallay madax badan oo ayka mid yihiin madaxweyne ku xigeenka, wasiirka arrimaha Gudaha, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI, xisbiga UCID iyo masuuliyiin badan.
Taliyaha Cusub Ee Ciidanka Booliska Somaliland Sareeye Guuto Maxamed Aadan Saqadhi (Daba-gale ) ayaa hadal kooban oo uu madasha ka jeediyey sheegay inay sharciga ku adkaan doonaan,isla markaana barbar wadi doonaan inuu boolisku la saaxiibo dadweynaha oo wada shaqayn ka dhexeysay.
“ waxaan ilaahay ka baryeyaa Inaan cadaalad ku maamuli doono oo daacad u noqon doono dadkayga iyo diintayda, ilaahay insha alla wuu noo fududeyn doonaa, dad badan baa I waydiiya hadii aad militeri tahay sideed ku maamuli karta booliska, qofku hadii uu aqoon ciidan soo maray wuu maamuli karaa oo xilal kala duwan baan soo maray oo hawlgalinta ciidanka Militeriga baan shan sanno, sifiican baan ula qabsan karaa”ayuu yidhi taliye Dabagalle.
Waxaanu intaas raaciyey “ Waxa lagu celceliyey in gacan qabow lagu maamulo shacabka, sharcigaan ku shaqayn doonaa oo waanu ku adkaan doonnaa, wixii sharcigu qabto gacan kulul baanu ku qaban doonnaa, saaxiibtinimada shacabka iyo booliska way garab socon doonaa waanu sii adkayn doonnaa,isku kaayo khaldami maayo ku shaqaynta sharciga iyo saaxiibtinimada shacabka.”
Taliye Dabagalle ayaa laga soo wareejiyey ciidanka Militeriga,isla markaana xilal kala duwan ka soo qabtay ciidanka Militeriga Somaliland.
Madaxweyne ku xigeenka Somaliland C/axmaan Saylici ayaa saraakiisha ciidanka booliska usoo jeediyey inay taliyahooda la shaqeeyaan, waxaanu taliyaha ku guubaabiyey inuu taladda badsado oo uu saraakiisha dhagaysto.
Waxa iyaguna halkaasi hadalo ka soo jeediyey gudoomiyaha maxkamadda Sare, xeer ilaaliyaha guud, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka Biyaha, wasiirka xanaanadda xoolaha, labadda xisbi mucaarad iyo masuuliyiin kale, kuwaas oo dhamaantoodaba la dardaarmay taliyaha cusub.
· ifraax on November 10 2019 · 0 Comments · 223 Reads ·